Ọbịbịa nke ntiwapụ nke ọrịa emeela ka anyị niile ghọta nke ọma na ahụike bụ akụ kacha ukwuu. N'ihe banyere nchekwa gburugburu ebe obibi ikuku, nje na nje nje juru ebe niile, mwakpo nke ifufe uzuzu, na oke formaldehyde n'ime ụlọ ọhụrụ na -emekwa ka ọtụtụ ndị enyi na -etinye uche na ikuku ...
Ezigbo Ndị Ahịa: Anyị nwere obi ụtọ ịkpọsa na n'ihi uto anyị dị ịrịba ama na 2020, ụlọ ọrụ Shenzhen kwagara n'ebe ọhụrụ n'April. Ọnọdụ ọhụrụ dị na 33 / F, Buildinglọ 11, Tiananyungu Industrial Park, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen City, Guangdong Province, China. Anyị na-ele anya ...
Na-echegbu onwe gị banyere COVID-19, ọtụtụ ndị na-echegbu onwe ha gbasara ikuku ikuku dị n'ime ụlọ yana ma ihe nhicha ikuku nwere ike inyere aka. Consumer Reports 'ọkachamara na-ekpughe ihe a obibi ikuku purifier nwere ike n'ezie ime mgbe ọ na-abịa ihicha ikuku. E nwere isi ihe atọ dị iche iche nke nhicha ikuku bụ nke markete ...
Site na mgbasa nke COVID-19, ọ bụla nkwekọrịta kwenyere mkpuchi mgbe ị na-apụ. Ya mere, n'ime ime ụlọ ebe ndị mmadụ na-ezukọ na ụlọ ọrụ ọfịs, nnukwu ụlọ ahịa, họtel, ụlọ oriri na ọ restaurantsụ ,ụ, wdg, ndị ọkachamara na-atụ aro na ịmepe windo maka ikuku bụ ụzọ kachasị akụ na ụba. ...
Mee 7th-May 8th 2021 Cross-border E-commerce Summit & Sourcing Fair emere na Hall 8 nke Shenzhen Futian International Convention and Exhibition Center. Ala juru eju. Na isiokwu nke “ụwa pere mpe, azụmaahịa ka ukwuu”, ọ dọtara ihe karịrị 300+ Ali na ...
Ndụmọdụ bara uru maka ichedo onwe gị na ndị ọzọ na COVID-19
1.Ewere ihe nkpuchi na-ekpuchi imi na ọnụ gị iji nyere aka chebe onwe gị na ndị ọzọ. 2.Nọrọ ụkwụ isii n'akụkụ ndị ọzọ na-esoghị gị. Nweta ọgwụ mgbochi COVID-19 mgbe ọ dịịrị gị. 4. Zere igwe mmadụ na oghere na-adịghị mma nke ime ụlọ. 5. Jiri ncha na mmiri saa aka gị mgbe mgbe. Jiri ha ...
anyị nwere ike iji ihe nkpuchi na ndị na-ehicha ikuku ọnụ n'oge ọrịa
Na nso nso a, ewezuga China, ọrịa okpueze ọhụụ zuru ụwa ọnụ amalitela ịdị njọ ọzọ, ọbụlagodi karịa na 2020. Ya mere, ọ ka dị mkpa iyi mkpuchi n'èzí, ọ dịkwa mkpa ịgbanye ihe nhicha ikuku na ulo. Ọ bụ ezie na ndị na-ehicha ikuku enweghị ike ịza nke ọma ...
Kedu ihe anyị kwesịrị ime megide COVID 19
Anyị niile maara na ndị mmadụ gburugburu ụwa ga-enweta ọgwụ mgbochi ọrịa megide COVID 19. Ọ pụtara na anyị nwere nchekwa zuru oke n'ọdịnihu? N'ezie, ọ dịghị onye nwere ike ijide n'aka na mgbe anyị nwere ike ịrụ ọrụ ma pụọ ​​n'efu. Anyị nwere ike ịhụ na enwere oge siri ike n'ihu anyị ma chọọ ịchebe iji chebe ...
Ndi nhicha nke ikuku nwere ike ime ka Covid-19 dị ọcha?
site ha na 21-04-16
Mgbe smog hapụrụ ọhụụ ndị mmadụ, ọtụtụ mmadụ n'ezie nwere obi abụọ na-adịghị mma banyere ndị na-ehicha ikuku, Ha chere na ọ dịghị mkpa ịzụta ihe nhicha ikuku. Ha enweghi obi erughị ala mgbe ha na-eku ume n'èzí kwa ụbọchị, mana ọbịbịa nke Covid-19 mere ka ndị mmadụ chee echiche ọzọ, Enwere dem ...
Nabata Iji Gaa na 2021 Ọhụrụ Na-abịa Ikuku Ọcha Ndụ
Anabata anyị ileta 2021 High Quality Air purifier Recommendation Live Show
Shenzhen Guanglei Electronic Co., Ltd. na-eme ihe ngosi dị ndụ na Made-in-China.com. Sonyere anyị ugbu a! Aha: 2021-03-03 16:00 PM UTC + 08: 00 Pịa URL na-eso nke ọma ka ị banye n'ime ụlọ ngosi dị ndụ ozugbo: https://live.made-in-china.com/ ulo-dmJnEcxWWQ ...
Nnọọ ileta anyị 2021 ọkụ na-ere ọkụ ikuku na ozone Generator Live Show
Shenzhen Guanglei Electronic Co., Ltd. na-eme ihe ngosi dị ndụ na Made-in-China.com. Sonyere anyị ugbu a! Aha: 2021 Hot Na-ere Ọcha Ikuku na Ozone Generator Start Time: 2021-03-02 20:00 PM UTC + 08: 00 Pịa URL na-esonụ iji banye ụlọ ngosi ngosi ndụ kpọmkwem: https: //live.made-in-china. com / ụlọ-NxEQ ...
Best Home Air Purifier Uk , kwesịrị ịdị neutralizes Home Air Purifier , Air Cleaner Home Air Purifier, Home Ikpocha ikuku, UV Home Air Purifier , Ozone Air Purifier Home ebusa , All Products